Post nguva: 11-03-2020
Oxygen chimwe chezvinhu zvemweya. Haina kuchena, haina hwema uye haina kunaka. Oxygen inorema kupfuura mweya. Iine huwandu hwe1.429g / L pasi pemamiriro ezvinhu akajairika (0 ° C uye kumanikidza kwemuchadenga 101325 Pa), uye yakanyungudika mumvura. Zvisinei, iyo solubility yakanyanya kuderera. Kana iko kumanikidza kuri 101kP ...Verenga zvimwe »
Post nguva: 08-19-2020
“Imwe yenzira dzinoshanda zvikuru dzekuchengetedza hupenyu kubva kuCOVID-19 kupa oxygen kuvarwere vanoida. WHO inofungidzira kuti pachiyero chezviitiko zvitsva zvinosvika miriyoni imwe pavhiki, pasi rose rinoda macubic metres anosvika mazana matanhatu nemazana matanhatu ezviuru pazuva, inova masirinda mahombe mazana masere nemazana masere ”- Dr Te ...Verenga zvimwe »